Fahasamihafana ny fivelomana | Reef Resilience
Ny fahatakarana ny sehatry ny fizahantany eo an-toerana sy ny famantarana ny fahafaha-manatsara ny fivelomana
Ny fiatoana amin'ny fizahan-tany vokatry ny valan'aretina COVID-19 dia nanimba ny indostria amin'ny ankamaroan'ny toerana manerana izao tontolo izao. Na dia nanalefaka ny fipoahana tany amin'ny toerana sasany aza ny fanohanan'ny governemanta sy ny fizahan-tany an-trano, ny fifohazana ny sehatry ny fizahantany dia tsy maintsy ilaina amin'ny fanarenana ny toekaren'ny vondrom-piarahamonina sasany. Na izany aza, miaraka amin'ity fiatoana amin'ny fizahantany ity, dia misy ihany koa ny fahafahana mamaha ny olan'ny fiankinan-doha amin'ny fizahan-tany amin'ny haran-dranomasina ho an'ny fiveloman'ny olona sy ny fiarovana, ary mikaroka ny mety ho fidiram-bola hafa amin'ny toerana izay manohana ny fiarovana. Amin'ny fanaovana izany, ny toekarena fizahan-tany matanjaka kokoa dia azo aorina aorian'ny valan'aretina COVID-19 izay vonona kokoa hiatrika ny krizy ara-tontolo iainana, sosialy, politika, fahasalamana, teknolojia, na toekarena amin'ny ho avy. "Raha maharitra ny rafitra, dia mibaribary fa tsy vitan'ny hoe mandresy ny krizy sy ny loza fotsiny izy io, fa ny mampifanaraka tsara ny fiovana amin'ny ankapobeny" (Prayag 2018).
Ny 2021 Solution Exchange dia nandinika tranga maromaro avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao sy ny fahafahana mampiovaova ny fivelomana ao amin'ny tranokala Resilient Reefs Initiative.
Ny mpanao politika dia tokony handinika ny fahafahana manatsara ny fidirana amin'ny asa fizahan-tany sy ny orinasa ho an'ny vondrom-piarahamonina First Nations, izay mitondra fomba fijery tena ilaina nefa miatrika sakana isan-karazany amin'ny fidirana toy ny vidin'ny fiantohana na fananana.
Ny COVID-19 dia namorona fepetra ahafahan'ny mpandraharaha eo an-toerana. Fanandramana voajanahary tsy mampino izany tamin'ny famoahana ny fandraharahana eo an-toerana any amin'ny faritra sasany, manomboka amin'ny fiovàna mankany amin'ny fambolena regenerative any Bali mankany amin'ny indostrian'ny micro mivelatra mamolavola vokatra voajanahary ao Belize.
"Ny fiaraha-monina dia mila tanana ambony fa tsy tolo-tanana". Ny singa fototra amin'ny fizahantany vondrom-piarahamonina dia ahitana ny asa izay an'ny vondrom-piarahamonina manokana, tarihina ary tantanin'ny vondrom-piarahamonina. Izany dia manome hery ny vondrom-piarahamonina, mitondra fidiram-bola ho an'ny isam-batan'olona sy ny fianakaviana (fa tsy ny orinasa lehibe), ary mampitombo ny fahaiza-manao sy mampivelatra fahaiza-manao vaovao.
Mamorona fahafahana mampihena na manala ny tsindry amin'ny harena voajanahary. Raha tokony hifindra fotsiny amin'ny karazana fizahan-tany amin'ny haran-dranomasina mankany amin'ny karazana fizahan-tany hafa amin'ny haran-dranomasina — dia samy miankina amin'ny harena voajanahary iray ihany ireo fivelomana ireo ary noho izany dia mora tohina amin'ireo karazana fahatafintohinana iray ihany — dia tokony hatao ny ezaka amin'ny fampivelarana asa fivelomana sy fidiram-bola vaovao. tena mahaleo tena amin'ny fananan'ny haran-dranomasina ary maharitra kokoa.
Mifantoha amin'ny hetsika fizahan-tany izay misy fiantraikany kely amin'ny tontolo iainana ary sarobidy ho an'ny mpampiasa. Mety tsy ho azo atao ny miala tanteraka amin'ny fiankinan-doha amin'ny vatohara ho fivelomana. Ny fomba iray mety hampihenana ny tsindry amin'ny rafitra dia ny famakafakana ny fiantraikany sy ny tombom-barotry ny hetsika fizahan-tany amin'ny haran-dranomasina izay mifantoka amin'ny safidy ambany sy sarobidy. Safidy iray hafa ny manampy lanja ny traikefa amin'ny fizahantany izay manala ny tsindry amin'ny haran-dranomasina.
Zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Izy ireo dia afaka manampy amin'ny fanombanana, hamantatra ary hitondra fahafahana vaovao ho an'ny fanavaozana amin'ny fampitomboana ny safidy fivelomana.
Spotlight any Belize
Ahoana no ahafahantsika mampiovaova ny fivelomana eo an-toerana sy mampihena ny tsindry amin'ny harena voajanahary?
Sary © Marcus Alama
Ny haran-dranomasina Belize, izay nahazo ny lisitry ny Lova Iraisam-pirenena UNESCO tamin'ny 1996, dia mirefy 300 km ary tafiditra ao anatin'ny rafitra mirefy 900 km fantatra amin'ny anarana hoe Mesoamerican Barrier Reef System. Ny haran-dranomasina sy ny honko ao aminy dia mitentina 150-190 tapitrisa dolara isan-taona amin'ny fizahan-tany, 14-16 tapitrisa dolara isan-taona amin'ny jono ary 231-347 tapitrisa dolara isan-taona amin'ny fiarovana ny morontsiraka. misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCooper et al. 2008manokatra fisie PDF ).
Tian'ireo mpiara-miombon'antoka Belize ny hamorona fahafahana hanala ny tsindry amin'ny harena voajanahary. Nopotehin'ny COVID-19 ny indostrian'ny fizahan-tany tao Belize, izay nampiato ny hetsika ara-toekarena nasionaly tamin'ny voalohany, nanasongadina ny filana ezaka fampivoarana ny fidiram-bola. Betsaka ireo niantehitra tamin’ny fidiram-bolan’ny fizahantany no niverina tamin’ny jono mivelona. Ny fiatoana amin'ny fizahan-tany ihany koa dia nanokatra ny fandraharahana ao an-toerana indrindra ny vehivavy eo an-toerana. Ny famoronana vokatra avy any Belize dia niteraka onjam-baovaon'ny orinasa madinika sy ny fampiasana sehatra an-tserasera mba hanampiana ny fidiram-bola.
Fanampin'izany, ireo mpitantana ny haran-dranomasina ao amin'ny Belize Barrier Reef System dia nanaiky io fiatoana amin'ny fizahan-tany io ho toy ny fahafahana hamaritana ny fenitry ny fizahan-tany maharitra ary koa ny fanombanana ny fahafaha-mitondra ny faritra an-dranomasina be mpitsidika.
Ahoana no ahafahantsika miantoka ny faharetan'ny safidy fivelomana isan-karazany izay tsy miankina amin'ny loharanon-karena tany am-boalohany? Inona no tokony hodinihina amin'ity karazana fiovan'ny fitondran-tena ity? Ny fikarohana ataonay dia mampiseho fa ny safidy mahomby indrindra dia rehefa mihamaro ny fivelomana manodidina ny fototry ny loharanon-karena iray ihany (loharanom-baovao izay heverina ho marefo). – Safira Vasquez, Minisiteran’ny Toekarena Manga
Fambolena Regenerative: Fahafahana Fizahantany Vaovao - Stephen Box, Ekolojia an-dranomasina
Fiaraha-monina manandratra amin'ny alàlan'ny fizahantany - Jamie Sweeting, Planeterra
Mitady fomba hanampiana ireo orinasa teratany hiroborobo – Henrietta Marrie, mpitarika teratany Aostraliana
Toeram-pambolena tsy voatanisa: ny opportunités touristiques vaovao - Stephen Box, Marine Ecology
Ny Vahaolana Vahaolana dia natao hanentana ny fisainana, hampivondronana ireo mpitantana sy mpiara-miombon'antoka amin'ny fifanakalozam-pahalalana sy ny fianarana, ary hanampy amin'ny hetsika eny an-kianja. Na dia tsy voalaza aza ny dingana manaraka manokana amin'ny fanaparitahana ny fivelomana, dia noresahina ny fomba mahafaoka kokoa amin'ny famolavolana rafitra fizahan-tany maharitra. Dingana manaraka fantatra:
Mamorona rafitra paikady momba ny fizahantany maharitra ho an'ny vondrom-piarahamonina haran-dranomasina.
Ny Solution Exchange dia nandinika ireo singa samihafa amin'ny paikady fizahan-tany maharitra — manome ohatra amin'ny fitaovana sy teknika isan-karazany. Ny mety ho dingana manaraka dia ny fampifangaroana ireo singa ireo sy ny famolavolana rafitra paikady momba ny fizahantany maharitra ho an'ny vondrom-piarahamonina haran-dranomasina, zavatra izay tsy misy amin'izao fotoana izao. Ilaina ny fifampidinihana bebe kokoa amin'ny tranokala sy ny mpiara-miombon'antoka mba hahatakarana bebe kokoa ny fitakiana sy ny mpihaino kendrena amin'ity karazana rafitra ity.
Famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina mifototra amin'ny fizahantany
Ny Diviziona Karaiba ao amin'ny Nature Conservancy, miaraka amin'ny Booking Cares Fund, dia namolavola ny traikefa REEFHabilitation mba hampiroboroboana ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fizahan-tany maharitra. Ny traikefan'ny REEFhabilitation dia manome traikefa amin'ny fianarana an-tanana ho an'ny mpizaha tany mba handray anjara mavitrika amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina, ary andrana any amin'ny Repoblika Dominikanina miaraka amin'ny Fundemar sy Grupo Puntacana Foundation. Ny fitaovana rehetra hanohanana ity traikefa amin'ny fizahan-tany ity dia atolotra ampahibemaso ho an'ny hafa izay maniry ny hanomboka tetikasa famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fizahan-tany amin'ny fampiasana fomba fanao tsara indrindra amin'ny famerenana amin'ny laoniny.
REEFHabilitation Experience Guide in misokatra amin'ny varavarankely vaovaoanglisymanokatra fisie PDF ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEspaniolamanokatra fisie PDF
REEFHabilitation misokatra amin'ny varavarankely vaovaobokikelymanokatra fisie PDF
Lahatsary ao amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoanglisy, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEspaniola, ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaoItaliana
Tahirin-kevitra momba ny fizahantany ambanin'ny rano ho an'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaonurserymanokatra fisie PDF , misokatra amin'ny varavarankely vaovaoOutplantingmanokatra fisie PDF , ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaofamerenana amin'ny laoninymanokatra fisie PDF fanaraha-maso
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoOECD Fanarenana ny fizahantany ho an'ny ho avy: valin-kafatra sy fanarenana ny politika COVID-19
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoReconstruire le Tourisme de Demain: Réponses des Pouvoirs Publics au COVID-19 et Reprise
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitomboana entin'ny fanavaozana any amin'ny faritra: Ny anjara asan'ny manampahaizana manokanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSAVE Tourism
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAny Galápagos, Mitady 'Sweet Spot' ny Approach Conservation Novel eo anelanelan'ny famokarana sy ny fiarovana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPlaneterra Community Tourism